မန်စီးတီး 3:0 စပါးစ် ပွဲအပြီး မှတ်မှတ်ရရ ထုတ်နုတ်ပြောစရာ အချက် ၇ ချက် – Sports A2Z
မန်စီးတီး 3:0 စပါးစ် ပွဲအပြီး မှတ်မှတ်ရရ ထုတ်နုတ်ပြောစရာ အချက် ၇ ချက်
မော်ရင်ညိုကြောင့် ဂါရက်သ်ဘေးလ်တယောက် ပုပ်နေသလား
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ အပယ်ခံအဖြစ်ကနေ စပါးအသင်းကို စည်တော်ရွမ်းပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့တဲ့ ဂါရက်သ်ဘေးလ်က မော်ရင်ညိုကြောင့် စပါးရဲ့လူအင်အားမှာ တယောက်စာပုပ်နေသလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။ ဒီရာသီမှာ စပါးအတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် ၂ ပွဲသာ ကစားခွင့်ရထားတဲ့ ဘေးလ်က ဒီပွဲမှာလည်း စပါး ၃ ဂိုးပြတ်ရှူံးနေချိန်၊ မျှော်လင့်ချက်အမဲ့ဆုံး အချိန်အခါရောက်မှ ဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ စပါးအသင်းရုန်းကန်နေရချိန်မှာ သူ့လို ကမ္ဘာ့အဆင့်တိုက်စစ်မှူးကို မော်ရင်ညိုဘာကြောင့် ခေါက်ထားတာပါလဲ? အသက် ၃၁ နှစ်သားဟာ စပါးမှာ နေရာတနေရာရဖို့ မော်ရာ၊ ဘာ့ချ်ဝင်း၊ လာမယ်လာတို့ရဲ့ နောက်မှာ တန်းစီနေရပါတယ်။
ဂန်ဒိုဂန်ကို နတ်ရေကန်ထဲ ပစ်ချခဲ့သလား
ဂန်ဒိုဂန်ဆိုတာ ဂိုးသွင်းလေ့မရှိတဲ့ ကစားသမားမျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသူဖြစ်တယ်။ အခုရာသီမှာတော့ မန်စီးတီးအသင်းအတွက် ဂိုးတွေဆက်တိုက်သွင်းနေတာက အံ့အားသင့်စရာကောင်းနေတယ်။ စပါးနဲ့ပွဲမှာ ၂ ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး ဒါက သူ့ရဲ့ ဒီရာသီ မန်စီးတီးသွင်းဂိုးမှာ ၁၁ ဂိုးအထိ ရှိလာတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရာသီ သွင်းဂိုးပေါင်းထက်ကို ကျော်လွန်အောင် စွမ်းဆောင်နေတာ နတ်ရေကန်ထဲ ပစ်ချလိုက်တဲ့အလားပါပဲ။ ပထမဂိုးမှာ အားနည်းတဲ့ဘယ်ခြေနဲ့ သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒုတိယဂိုးက ပိုတောင်လှနေပါသေးတယ်။ ဂိုးသမားအက်ဒါဆန်ရဲ့ ကန်တင်ပေးပို့မှုကို စပါးလူကျွံထောင်ချောက်ကိုဖောက်ပြီး လှလှပပ သေသေသပ် ဘောလုံးဖမ်းထိန်းရင်း အဆုံးသတ်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ သူက ဒီရာသီမှာ ဘရူနိုရဲ့နောက် ဂိုးသွင်းအများဆုံး ကွင်းလယ်လူအဖြစ်ရပ်တည်လာတာ ထူးခြားနေပါတယ်။
ဒီဘရိုင်းမပါဘဲ ပေါက်ကွဲပြခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး
ပြီးခဲ့တဲ့လက အက်စတန်ဗီလာနဲ့ပွဲမှာ ဒဏ်ရာရပြီး အနားယူနေရတဲ့ မန်စီးတီးရဲ့ အဆင့်အမြင့်ဆုံး ကစားသမား ဒီဘရိုင်းမပါဝင်ချိန်မှာလည်း ဂွာဒီယိုလာရဲ့ မန်စီးတီးက အကြီးအကျယ် ပေါက်ကွဲကစားနေဆဲပါပဲ။ ဒါဟာ သူမပါဝင်ချိန်မှာ မန်စီးတီးရဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ ၇ ပွဲဆက် နိုင်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အထိ ပြောင်မြောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဘရိုင်းမပါလည်း မန်စီးတီးက ပန်းပန်လျက်ပဲဆိုတာ အဓိကပြိုင်ဘက်တွေကို ထိတ်လန့်စေခဲ့ပြီး သူပါလာတဲ့ မန်စီးတီးက ကျားကိုအတောင်ပံတပ်သလို လုပ်လာတော့မလားလို့ စိုးရိမ်နေကြပါပြီ။
နွံထဲမှာ နစ်နေဆဲ စပါး
မော်ရင်ညိုရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် နောက်ဆုံး ၇ ပွဲက စိတ်ပျက်စရာပါ။ တန်းဆင်းဇုန်အသင်း ၃ သင်းနဲ့ ၃ ပွဲကိုသာ နိိုင်ထားပါတယ်။ ဂိုးပေါက်ပျောက်နေတာက တိုက်စစ်ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်နေတဲ့ အသင်းလားလို့ ပြောချင်စရာအထိ ရောက်လာတယ်။ နောက်ဆုံး ၅ ပွဲမှာ ၃ ဂိုးသာသွင်းနိုင်ပြီး ၁၀ ဂိုးအထိပေးထားရတာကိုကြည့်ရင် ပန်းသေပန်းညှိုးအဆင့်ထက်မက လိပ်ခေါင်းရောဂါပါ ရနေသလိုပါ။ တိုက်စစ်ရော ခံစစ်ပါ ချုံးချုးကျနေပါတယ်။ ဟာရီကိန်း နဲ့ ဆွန်ဟောင်မင်ကိုသာ မှီခိုနေရတဲ့ စပါးရဲ့သရုပ်မှန်အစစ်ကို မော်ရင်ညို ဘွားဘွားကြီးမြင်နေရပြီလို့ ဆိုနိုင်တယ်။
ချန်ပီယံအသင်းမျိုးရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာကို မြင်စေခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး
အပြာရောင် မန်စီးတီးက တိုက်စစ်၊ ခံစစ် ပြောစရာမရှိအောင် အစွမ်းအစတွေပြည့်ဝနေတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလကတည်းက ပြိုင်ပွဲစုံ ၂၃ ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိ ဖြတ်သန်းမှုဟာ ချန်ပီယံဖြစ်မယ့်အသင်းတသင်းရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာကို ပြသလာပြီလို့ ပရိသတ်တွေကြား လက်ဝါးချင်းရိုက်စရာဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ ပရိီးမီးယားလိဂ်မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နောက် တိုက်စစ်အကောင်းဆုံး၊ ဂိုးအများဆုံး ဒုတိယအသင်းအဖြစ်ရပ်တည်နေတယ်။ ၂၃ ပွဲကစား ပေးဂိုး ၁၄ ဂိုး၊ ပေးဂိုးမရှိ Clean Sheet ၁၄ ပွဲနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ခံစစ်အကောင်းဆုံးအသင်းအဖြစ် ရပ်တည်နေတာက မန်စီးတီးဘယ်အထိသွားဦးမလဲဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အထူးကောင်းနေပါပြီ။
အန်ဖီးလ်မှာ ပင်နယ်တီကို မိုးထောင်ကန်ခဲ့တဲ့ ဂန်ဒိုဂန်ရဲ့လွဲချော်မှုက လူသားဆန်ဆန်အမှားဖြစ်ပေမယ့် မန်စီးတီးမှာ ပင်နယ်တီကို ဘယ်သူကပင်တိုင်ကန်မလဲဆိုတာ ဂွာဒီယိုလာ ချမှတ်ရမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ ဒါကရေရှည်ပြဿနာဖြစ်လာပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်း တက်ခဲ့တဲ့ပြဿနာဖြစ်လို့ မြန်မြန်ဖြေရှင်းရပါမယ်။ ဂန်ဒိုဂန်လွဲတယ်။ စတာလင်လွဲတယ်။ ဒီဘရိုင်းလွဲတယ်။ ပင်နယ်တီမှာယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေကြပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ရိုဒရီက ပင်နယ်တီတက်ကန်ခဲ့ရတယ်။ အကောင်းဆုံးကန်ချက်မဟုတ်သလို လိုရစ်ကာကွယ်လို့ရနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ်။
အက်ဒါဆန်က မန်စီးတီးမှာ ပင်နယ်တီကန်သွင်းမှု အကောင်းဆုံးကစားသမားလို့ ဂွာဒီယိုလာက ထုတ်ပြောဖူးတယ်။ ပင်နယ်တီကန်မယ့်သူမရှိရင် အက်ဒါဆန်တက်ကန်လိမ့်မယ်လို့ နောက်သလိုပြောင်သလို သူပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ၁၂ ကိုက်စည်းကနေ ဂိုးသမားတယောက်ပင်နယ်တီကန်သွင်းမယ့်အရေးက အတော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပါလိမ့်မယ်။
ေမာ္ရင္ညိဳေၾကာင့္ ဂါရက္သ္ေဘးလ္တေယာက္ ပုပ္ေနသလား
ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းရဲ႕ အပယ္ခံအျဖစ္ကေန စပါးအသင္းကို စည္ေတာ္႐ြမ္းၿပီး အိမ္ျပန္လာခဲ့တဲ့ ဂါရက္သ္ေဘးလ္က ေမာ္ရင္ညိဳေၾကာင့္ စပါးရဲ႕လူအင္အားမွာ တေယာက္စာပုပ္ေနသလားဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။ ဒီရာသီမွာ စပါးအတြက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ၂ ပြဲသာ ကစားခြင့္ရထားတဲ့ ေဘးလ္က ဒီပြဲမွာလည္း စပါး ၃ ဂိုးျပတ္ရႉံးေနခ်ိန္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမဲ့ဆုံး အခ်ိန္အခါေရာက္မွ ဝင္ကစားခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ စပါးအသင္း႐ုန္းကန္ေနရခ်ိန္မွာ သူ႔လို ကမာၻ႔အဆင့္တိုက္စစ္မႉးကို ေမာ္ရင္ညိဳဘာေၾကာင့္ ေခါက္ထားတာပါလဲ? အသက္ ၃၁ ႏွစ္သားဟာ စပါးမွာ ေနရာတေနရာရဖို႔ ေမာ္ရာ၊ ဘာ့ခ်္ဝင္း၊ လာမယ္လာတို႔ရဲ႕ ေနာက္မွာ တန္းစီေနရပါတယ္။
ဂန္ဒိုဂန္ကို နတ္ေရကန္ထဲ ပစ္ခ်ခဲ့သလား
ဂန္ဒိုဂန္ဆိုတာ ဂိုးသြင္းေလ့မရွိတဲ့ ကစားသမားမ်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသူျဖစ္တယ္။ အခုရာသီမွာေတာ့ မန္စီးတီးအသင္းအတြက္ ဂိုးေတြဆက္တိုက္သြင္းေနတာက အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေနတယ္။ စပါးနဲ႔ပြဲမွာ ၂ ဂိုးသြင္းယူခဲ့ၿပီး ဒါက သူ႔ရဲ႕ ဒီရာသီ မန္စီးတီးသြင္းဂိုးမွာ ၁၁ ဂိုးအထိ ရွိလာတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ရာသီ သြင္းဂိုးေပါင္းထက္ကို ေက်ာ္လြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေနတာ နတ္ေရကန္ထဲ ပစ္ခ်လိုက္တဲ့အလားပါပဲ။ ပထမဂိုးမွာ အားနည္းတဲ့ဘယ္ေျခနဲ႔ သြင္းယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယဂိုးက ပိုေတာင္လွေနပါေသးတယ္။ ဂိုးသမားအက္ဒါဆန္ရဲ႕ ကန္တင္ေပးပို႔မႈကို စပါးလူကြၽံေထာင္ေခ်ာက္ကိုေဖာက္ၿပီး လွလွပပ ေသေသသပ္ ေဘာလုံးဖမ္းထိန္းရင္း အဆုံးသတ္သြားခဲ့တာျဖစ္တယ္။ သူက ဒီရာသီမွာ ဘ႐ူႏိုရဲ႕ေနာက္ ဂိုးသြင္းအမ်ားဆုံး ကြင္းလယ္လူအျဖစ္ရပ္တည္လာတာ ထူးျခားေနပါတယ္။
ဒီဘ႐ိုင္းမပါဘဲ ေပါက္ကြဲျပခဲ့တဲ့ မန္စီးတီး
ၿပီးခဲ့တဲ့လက အက္စတန္ဗီလာနဲ႔ပြဲမွာ ဒဏ္ရာရၿပီး အနားယူေနရတဲ့ မန္စီးတီးရဲ႕ အဆင့္အျမင့္ဆုံး ကစားသမား ဒီဘ႐ိုင္းမပါဝင္ခ်ိန္မွာလည္း ဂြာဒီယိုလာရဲ႕ မန္စီးတီးက အႀကီးအက်ယ္ ေပါက္ကြဲကစားေနဆဲပါပဲ။ ဒါဟာ သူမပါဝင္ခ်ိန္မွာ မန္စီးတီးရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲစုံ ၇ ပြဲဆက္ ႏိုင္ပြဲျဖစ္လာတဲ့အထိ ေျပာင္ေျမာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဘ႐ိုင္းမပါလည္း မန္စီးတီးက ပန္းပန္လ်က္ပဲဆိုတာ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ေတြကို ထိတ္လန္႔ေစခဲ့ၿပီး သူပါလာတဲ့ မန္စီးတီးက က်ားကိုအေတာင္ပံတပ္သလို လုပ္လာေတာ့မလားလို႔ စိုးရိမ္ေနၾကပါၿပီ။
ႏြံထဲမွာ နစ္ေနဆဲ စပါး
ေမာ္ရင္ညိဳရဲ႕ ပရီးမီးယားလိဂ္ ေနာက္ဆုံး ၇ ပြဲက စိတ္ပ်က္စရာပါ။ တန္းဆင္းဇုန္အသင္း ၃ သင္းနဲ႔ ၃ ပြဲကိုသာ နိိုင္ထားပါတယ္။ ဂိုးေပါက္ေပ်ာက္ေနတာက တိုက္စစ္ပန္းေသပန္းညႇိဳးျဖစ္ေနတဲ့ အသင္းလားလို႔ ေျပာခ်င္စရာအထိ ေရာက္လာတယ္။ ေနာက္ဆုံး ၅ ပြဲမွာ ၃ ဂိုးသာသြင္းႏိုင္ၿပီး ၁၀ ဂိုးအထိေပးထားရတာကိုၾကည့္ရင္ ပန္းေသပန္းညႇိဳးအဆင့္ထက္မက လိပ္ေခါင္းေရာဂါပါ ရေနသလိုပါ။ တိုက္စစ္ေရာ ခံစစ္ပါ ခ်ဳံးခ်ဳးက်ေနပါတယ္။ ဟာရီကိန္း နဲ႔ ဆြန္ေဟာင္မင္ကိုသာ မွီခိုေနရတဲ့ စပါးရဲ႕သ႐ုပ္မွန္အစစ္ကို ေမာ္ရင္ညိဳ ဘြားဘြားႀကီးျမင္ေနရၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္တယ္။
ခ်န္ပီယံအသင္းမ်ိဳးရဲ႕ စ႐ိုက္လကၡဏာကို ျမင္ေစခဲ့တဲ့ မန္စီးတီး
အျပာေရာင္ မန္စီးတီးက တိုက္စစ္၊ ခံစစ္ ေျပာစရာမရွိေအာင္ အစြမ္းအစေတြျပည့္ဝေနတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလကတည္းက ၿပိဳင္ပြဲစုံ ၂၃ ပြဲဆက္ ရႈံးပြဲမရွိ ျဖတ္သန္းမႈဟာ ခ်န္ပီယံျဖစ္မယ့္အသင္းတသင္းရဲ႕ စ႐ိုက္လကၡဏာကို ျပသလာၿပီလို႔ ပရိသတ္ေတြၾကား လက္ဝါးခ်င္း႐ိုက္စရာျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။ ပရိီးမီးယားလိဂ္မွာ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ေနာက္ တိုက္စစ္အေကာင္းဆုံး၊ ဂိုးအမ်ားဆုံး ဒုတိယအသင္းအျဖစ္ရပ္တည္ေနတယ္။ ၂၃ ပြဲကစား ေပးဂိုး ၁၄ ဂိုး၊ ေပးဂိုးမရွိ Clean Sheet ၁၄ ပြဲနဲ႔ ပရီးမီးယားလိဂ္ရဲ႕ ခံစစ္အေကာင္းဆုံးအသင္းအျဖစ္ ရပ္တည္ေနတာက မန္စီးတီးဘယ္အထိသြားဦးမလဲဆိုတာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အထူးေကာင္းေနပါၿပီ။
အန္ဖီးလ္မွာ ပင္နယ္တီကို မိုးေထာင္ကန္ခဲ့တဲ့ ဂန္ဒိုဂန္ရဲ႕လြဲေခ်ာ္မႈက လူသားဆန္ဆန္အမွားျဖစ္ေပမယ့္ မန္စီးတီးမွာ ပင္နယ္တီကို ဘယ္သူကပင္တိုင္ကန္မလဲဆိုတာ ဂြာဒီယိုလာ ခ်မွတ္ရမယ့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါ။ ဒါကေရရွည္ျပႆနာျဖစ္လာၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည္း တက္ခဲ့တဲ့ျပႆနာျဖစ္လို႔ ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းရပါမယ္။ ဂန္ဒိုဂန္လြဲတယ္။ စတာလင္လြဲတယ္။ ဒီဘ႐ိုင္းလြဲတယ္။ ပင္နယ္တီမွာယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ေနၾကပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ ႐ိုဒရီက ပင္နယ္တီတက္ကန္ခဲ့ရတယ္။ အေကာင္းဆုံးကန္ခ်က္မဟုတ္သလို လိုရစ္ကာကြယ္လို႔ရႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။
အက္ဒါဆန္က မန္စီးတီးမွာ ပင္နယ္တီကန္သြင္းမႈ အေကာင္းဆုံးကစားသမားလို႔ ဂြာဒီယိုလာက ထုတ္ေျပာဖူးတယ္။ ပင္နယ္တီကန္မယ့္သူမရွိရင္ အက္ဒါဆန္တက္ကန္လိမ့္မယ္လို႔ ေနာက္သလိုေျပာင္သလို သူေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ ၁၂ ကိုက္စည္းကေန ဂိုးသမားတေယာက္ပင္နယ္တီကန္သြင္းမယ့္အေရးက အေတာ္ေလးစိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။
Must Win ပွဲတစ်ပွဲမှာ အမှတ်လျော့ပြီး ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ရုန်းကန်ရတော့မယ့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်
14 Feb နေ့လည်ခင်း နောက်ဆုံးရ ချဲလ်ဆီးသတင်းများ စုစည်းမှု